Qufulka jeebka loogu furayo taleefanka otomaatiga ah | Androidsis
Manuel Ramirez | | Codsiyada Android, Tababarada
Android waxay leedahay tayo wanaagsan marka ay timaado qalabaynta shaqooyinka qaarkood. Haddii ay tahay inaan u helno barnaamij ku habboon tan, Tasker waa mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee aan ka fikiri karno, annaga oo aan ilaawin kuwa kale oo badan. Fikrad yar iyo aqoon, xumaan ayaa lagu samayn karaa si taleefoonkeennu ugu yaraan wax walba keligiis u sameeyo.
Laakiin haddii aan rabno terminaalkeena Android si toos ah u furo daqiiqada aan jeebka kala soo baxno iyo ma dooneyno inaan soo galino qaabeynta, App-ka aan maanta ku hayno Androidsis waa midka ku habboon tan waxaana lagu magacaabaa Pocket Lock.
1 Qufulka jeebka
2 Sideen u isticmaalaa Qufulka jeebka?
3 Sideen u rujiyaa barnaamijka?
4 Marka la soo koobo
App ah bilaash dukaanka Play iyo in ay fududeyn doonto hawsha ah in taleefanka la furo xilliga aan ka soo bixinno jeebka ama xitaa bacda.
Qaabka barnaamijkani u shaqeeyo waa iyadoo la adeegsanayo dareemaha dhawaanshaha iyo xawaare-hawraha Si aad u fuliso ficilkan oo umuuqda in lagu qaban doono sixir, laakiin hey, tani sidoo kale waa wax yar oo Android ah.
Waa in lagu xisaabtamo in ka-reebitaannada la hawl-gelin karo oo aanu barnaamijku shaqeyn doonin oo noqon doona markaan soo wacno ama xitaa marka shaashadda la wareego.
Sideen u isticmaalaa Qufulka jeebka?
Si loo helo barnaamijka, waxa ugu horeeya ee la sameeyo waa in la dhaqaajiyo.
Halkan waxaad ka heli kartaa xulo habka qufulka la door bidaayo, waqti u samee isla ama isku hagaaji waxyaabaha ka reeban ee la doonayo si uusan taleefanka u xirmin.
Ka dib markii uu sameeyay dejimaha kala duwan waan dhaqaajin karnaa barnaamijka Si loo helo shaashadda taleefanka markaan ka soo saarayno jeebkeenna ama boorsadeena.
Sideen u rujiyaa barnaamijka?
Sida barnaamij kale oo kale, lagama saari karo maareeyaha barnaamijka, markaa ha argagixin, maadaama habka loo sameeyo ay tahay mid aad u fudud. Laga soo bilaabo menu-ka barnaamijka (astaamaha leh 3 dhibic oo toosan), waxaa jira ikhtiyaar lagu tirtiro barnaamijka.
Marka la soo koobo
Qufulka jeebka waxay bixisaa hab xiiso leh oo lagu furo taleefankaaga Haddii kale, waxaan dooneynaa inaanan ku khasaarin ilbiriqsi markaan u diyaarinayno inaan ku qabanno mid ka mid ah howlaha maalinlaha ah ee aan ku qabanno casriga.
Intaas aan ahayn waxaa laga yaabaa inay ku habboon yihiin taleefannada qaarkood meesha badhanka korontadu ku yaallo meel khaldan oo aad u baahan tahay barnaamij kaa badbaadinaya tillaabadan inaad u rogto ama aad xannibto.
Sidaan horeyba u iri, barnaamijku waa bilaash, inkasta oo uu leeyahay nooc Pro ah oo lagu iibsado barnaamijka gudaha oo ah € 0,78 awood u siiso inaad abuurto waxyaabo ka reeban barnaamijyada. Waxaad sidoo kale taageeri doontaa horumarinta barnaamijkan xiisaha leh ee si wanaagsan loo abuuray ee loogu talagalay cusbooneysiinta mustaqbalka.
Developer: Dardaaran X
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo furo loona xiro taleefankaaga Android marka aad kala soo baxeyso jeebkaaga
Dhammaan macluumaadka ku saabsan Android Lollipop